ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရောက်ရှိ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် နှင့်ဇနီးကြိုဆို
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည့် မြန်မာ-ထိုင်6းth High Level Committee Meeting တက်ရောက်မည့် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်Gen. Tarnchaiyan Srisuwan နှင့်ဇနီးMrs. Jiraporn Srisuwan ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းက ပုဂံ-ညောင်ဦး လေဆိပ် သို့ရောက်ရှိလာရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ HLC အစည်းအဝေး ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှပူးတွဲအတွင်းရေးမှူး Lt. Gen.Kumron Kearwichayajane၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် (ကြည်း၊ရေ၊လေ) စစ်သံမှူး များနှင့်တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက်ညပိုင်းတွင် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် Gen. Tarnchaiyan Srisuwan နှင့်ဇနီးဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင် လှိုင်နှင့် ဇနီးတို့က ညပိုင်းတွင် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း Orient Pandaw သင်္ဘောပေါ်၌ ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ အခမ်းအနားသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်Gen. Tarnchaiyan Srisuwan နှင့်ဇနီးMrs. Jiraporn Srisuwan၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်းနှင့် ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှတပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့် ဇနီးများ၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်မှအရာရှိကြီးများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်သံမှူး၊ ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) စစ်သံမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာညစာစားပွဲသို့တက်ရောက်လာကြသူများသည် တန့်ကြည်တောင် ရန်အောင်မြင် ကျောင်းသင်္ဘောဆိပ်မှသင်္ဘောဖြင့်ထွက်ခွာ၍ ဧရာဝတီမြစ် ကြောင်းတစ်လျှောက် နေဝင်ဆည်းဆာအလှအားကြည့်ရှုကြပြီး ညအချိန် တွင် မြစ်အတွင်းရောင်စုံမီးမျှောပွဲအား ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်Gen. Tarnchaiyan Srisuwan တို့သည်အခမ်းအနား တက်ရောက်လာကြသူ များနှင့်အတူ ညစာအားအတူတကွသုံးဆောင်ကြသည်။ ညစာသုံးဆောင် အပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ် မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဇနီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီး Mrs. Jirap-orn Srisuwanဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့သည် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်၏ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှနှင့်အဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါပြီး ယမန်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်း တွင် ရွှေစည်းခုံစေတီတော်နှင့် အာနန္ဒာစေတီတော်သို့ သွားရောက်ဖူးမြော် ၍ ပန်း၊ရေချမ်း၊ ဆီမီးများကပ်လှူပူဇော်ကြပြီး ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးကာအလှူငွေများဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြသည်။
ထို့နောက် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ဇနီး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ပုဂံရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်သို့ သွား ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာကြရာ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်း လင်းပြသ ခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်ပြီး ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်၏ ဇနီးဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ လိုက်ပါပြီး ပုဂံမြို့ရှိရွှေပြည်နန်းသနပ်ခါးပြတိုက်နှင့် ဦးဘငြိမ်း ယွန်းထည်ပစ္စည်းဆိုင် သို့သွားရောက် ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ WT